Technology Archives - News20 Media
Oct292021 by N20No Comments
सामाजिक सञ्जाल फेसबुककाे नाम परिवर्तन गरेर “मेटा” राखियाे
काठमाडौं– सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्नो कम्पनी नाम परिवर्तन गरी ‘मेटा’ राखेको छ। बिहीबार फेसबुकको वार्षिक कनेक्ट कन्फ्रेन्समा फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले कम्पनीका नयाँ कर्पोरेट नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। कम्पनीलाई नयाँ नाम दिइएपनि यसअधिका कुनै संरचनामा भने परिवर्तन नहुने उनले बताएका छन्। साथै, यसअघि सञ्चालित एप्स र तिनका ब्रान्ड परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ। कम्पनीअन्तर्गत हाल फेसबुकसँगै मेसेन्जर, ह्वाटस्एप, इन्स्टाग्रामलगायत सञ्चालनमा छन्। फेसबुकले एउटामात्रै सञ्जालको प्रतिनिधित्व गरेका कारण नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेको जुकरबर्गले बताए। काठमाडौं– सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्नो कम्पनी नाम परिवर्तन गरी ‘मेटा’ राखेको छ। बिहीबार फेसबुकको वार्षिक कनेक्ट कन्फ्रेन्समा फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले कम्पनीका नयाँ कर्पोरेट नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। कम्पनीलाई नयाँ नाम दिइएपनि यसअ...
छाेटाे दुरीका सार्वजनिक यातायातकाे भाडा आजदेखि बढ्यो !
१ कार्तिक, काठमाडौं। बाग्मती प्रदेश सरकारले बढाएको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा आजदेखि लागू भएको छ। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आजदेखि लागू हुने गरी नयाँ भाडादर तोकेको हो । जसअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चढ्नासाथ १८ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ । यो भाडादर ५ किलोमिटरसम्म लागू हुनेछ । यस्तै १० किमिसम्म २३ रुपैयाँ, १५ किमिसम्म २७ रुपैयाँ, २० किमिसम्म ३० रुपैयाँ र २० किमिभन्दा माथि ३५ रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ । यस्तै उपत्यका बाहेक साबिकको भाडादरमा प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यो भाडादरमा यात्राले १५ केजीसम्म निःशुल्क र त्यसमाथि १० केजीसम्म प्रतिकेजी ५ रुपैयाँका दरले सरसामान वा गुन्टा लैजान पाउनेछन् । १ कार्तिक, काठमाडौं। बाग्मती प्रदेश सरकारले बढाएको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा आजदेखि लागू भएको छ। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आजदेखि ...
सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गयाे, काठमाडौंमा पनि धक्का महसुस !
१ कार्तिक, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकमा सोमबार १० मिनेटको अन्तरालमा दुई पटक भूकम्प गएको छ । सिन्धुपाल्चोकको फाङफुङ केन्द्र भएर १० मिनेटको फरकमा दुई भूकम्पक गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेर ४६ मिनेट र १ बजेर ५६ मिनेटमा ४.७ म्‍याग्निच्‍युडको दुई भुकम्प गएको हो । यसअघि आइतबार गोरखा केन्द्रविन्दु भएर ४.३ म्‍याग्निच्‍युडको भूकम्प गएको थियो ।...
Oct12019 by N20No Comments